Anontanio Semalt: Inona no fomba mora indrindra handosirana ny fanamarinana Spam
Aorian'ny fandefasana ny Google Analytics, raha hitanao fa nihabetsaka ny fifamoivoizanao, dia marika fa ny fahazoan-dàlanao dia mahazo fijery sandoka ary tokony handray fepetra ianao mba hanafoanana azy ireo amin'ny fotoana mety.
Nampitandrina i Artem Abgarian, mpitantana ny fahombiazan'ny Customer Success of Semalt , fa indrisy fa tsy misy fomba hanesorana tanteraka ny rindrambaiko avy amin'ny Google Analytics. Na izany aza dia azonao atao ny manamaivana ireo loza mety hitranga amin'ny alalan'ny fomba amam-panao maro.
Spam bots ary ny fampiasana azy ireo
Iray amin'ireo antony lehibe ahazoantsika tsipika spam ny botswana spam. Ny hackers dia manamboatra azy ireo amin'ny fomba maromaro ary miezaka ny hampiditra olona marobe amin'ny famoahana ny tranonkala - ricambi cimatti kaiman. Maniraka rohy mampifandray amin'ny mailakao izy ireo ary mody milaza fa afaka mitondra fiara be dia be izy ireo. Rehefa tsindry amin'ireo rohy ireo dia ho hitanao fa maro ny fifamoivoizana ny tranokalanao, fa tsy misy ifandraisany amin'ny zava-misy ny fifamoivoizana. Ireo mpiloka dia mampiasa spam bots mba hampikony anao.
Mampiasa fomba maro samihafa ny spam botso amin'ny famoronana spam referral: amin'ny alalàn'ny fitsangatsanganana ghost sy ny mpitsikilika. Ny Google Analytics dia tsy afaka manombana na mitsara izay antsoina hoe mpitsoa-ponenana ary inona no atao hoe fitsaboana ara-tsaina. Ireo referanso ara-pitsarana dia miseho rehefa tratran'ny fitadiavana sandoka na tsy fantatra ny Google Analytics, raha toa kosa ny fanavaozana ny mpitsikilo rehefa mahazo valiny maromaro avy amin'ny loharanom-baovao tsy fantatra. Ilainao ny manala ireo bots ireo satria mila mampihena ny entana eo amin'ny servers sy ny tranonkalanao ianao. Zava-dehibe koa ny hahazoana data marina avy amin'ny Google Analytics ho an'ny fahasalaman'ny sitanao..
Tsy mety ny milaza fa maro ny spam maro fa ireo malaza dia darodar.com, ilovevitaly.co, semalt.com, ary buttons-for-website.com. Zava-dehibe ny miala amin'ireo tranokala sy ireo tranonkala hafa mitovy amin'izay mety hanimba ny tranokalanao ary mety hanimba ny Google AdSense anao.
Famindrana ny bota sy ireo jiolahy tsara fitondran-tena
Azonao atao ny manala ireo fehiloha sy botsa tsara amin'ny fampahalalana anao amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny safidinao. Raha tsy manakana na manala azy ireo ianao raha mbola azo atao, dia mety ho simba ny tranonkalanao. Ny ankabeazan'ireo botsika sy spiders dia mahita namana, fa tena manimba ny angona an-tserasera sy ny aterineto. Ny Google Analytics dia manolotra karazana fifanarahana, torohevitra, tricks, ary sosokevitra hanesorana azy ireo amin'ny tranokalanao. Afaka mandeha any amin'ny fizarana admin ianao mba hijery ireo fanavaozana vaovao ary hanitsy ny fijerinao.
Ahoana no hanaisotra ny fomba fitantanana ny fanahy?
Taorian'ny fanandramana zavatra sasany dia nahita aho fa mora ny manakana ny fitsangatsanganana ghost amin'ny alàlan'ny fametrahana sy fametahana ny sivanao. Ataovy azo antoka fa mampiasa karazana filters ianao mba hahazoana maimaim-poana ny fiarovana an-tserasera. Tokony hanangana solon'ireo mpampiantrano ihany koa ianao. Noho izany dia mila mametraka ny ID na ny laharana manaraka. Avelao aho hilaza aminao fa tena mahira-tsaina ireo botsika; Tsy avelan'izy ireo hivoaka raha tsy simba ny tranokalanao na Google Analytics.
Nesorinao ilay sari-panadinana
Raha vao ampifanao ireo fanovana voalaza etsy ambony ireo, ny dingana manaraka dia ny mametraka sivana valin-toerana manan-kery izay hitazona ny tranonkalanao sy ny Google Analytics ho voaro amin'ny spam referral. Aza adinoina fa mitsidika ny tranokalanao ireo mpitsikilo ankehitriny ary manandrana manimba ny angon-drakitrao. Izany no antony tokony hanesoranao azy ireo amin'ny toerana misy anao sy ny Analytics amin'ny voalohany.